Wayengadidiwe imali ethenga Usuthu uZungu, wayenecebo lokulusimamisa - Impempe
Wayengadidiwe imali ethenga Usuthu uZungu, wayenecebo lokulusimamisa
May 7, 2021 Impempe.com
Ngesikhathi kuvela ukuthi AmaZulu FC ayadayiswa, ekuqaleni kwesizini, kwaba buhlungu kakhulu kwabanye abalandeli boSuthu ngoba babengazi ukuthi azowela ezandleni ezinjani.
Phela bona base bejwayele umndeni wakwaSokhela obese uhlale isikhathi eside uwa uvuka neqembu, lidliwa yizembe libuye libuyele esigabeni esiphezulu.
Nebala kugcine kwenzekile ukuthi Usuthu luwele ezandleni zikasomabhizinisi owaziwayo, uSandile Zungu.
Ubani yena lo Zungu?
Abaningi babezibuza ukuthi kazi umfo kaZungu uyalazi yini ibhola noma wayethenga AmaZulu ngoba ebalekela ukukhokha intela nje.
Abanye baze bahleka baqethuka ngesikhathi uZungu ethi ufuna ukubona AmaZulu eqeda kwiTop 4 ekupheleni kwesizini.
AmaZulu lawa ahlale evika izembe amasizini wonke? Phinde. Uzishintshile izinto uZungu kuMaZulu, wasayinisa abadlali walanda noBenni McCarthy ukuthi azoqeqesha iqembu.
Sekuyindaba okungamele silokhu siyizeka ukuthi Usuthu lusendaweni yesibili kwilogi yeDStv Premiership njengoba sekusele imidlalo emine kuphela kusongwe isizini.
Ngabe yini ngempela ehehe umfo kaZungu ukuthi angene ebholeni ngoba unawo amanye amabhizinisi ahamba kahle?
“Uthando lwami lwebhola luyefana nolwabantu abaningi. Uneqembu olesekayo, olilandelayo, ofisa liwine. Ukuze ngifike ezingeni lokuthi sengathi ngingathanda ukuba neqembu, kuqale sengigxilile kwezamabhizinisi.
“Ngabona ukuthi, yazi sengingakwazi ukuthenga iqembu lebhola,” kusho uZungu.
Le ndoda ungalindela ukuthi iziphakamise uma kuya ngendlela ephumulele ngayo kodwa izibeke phansi, iyahlonipha. Ngaphezu kwalokho iyayazi into esike ikhuluma ngayo, ayifuniseli.
Yibhizinisi nalo leli
“Nokho engizitshele khona ukuthi ukuze le nto ibe yimpumelelo kuyomele ngenze ngendlela ehlukile kuneyabanye. Hhayi ukuthi nginemali eningi ngiyoyifaka nje nginganaki.
“Nayo le angiyithathe njengebhizinisi, ngizitshele ukuthi uma ngifake imali engaka nansi inzuzo engizoyithola, nini.
“Ngathi uma sengibukisisa kahle ngathi nali iqembu, alikho elinye yilona leli. Ngoba linomlando, linokwesekwa okuqinile.
“Lidala, linesigqi, esingathi uma ibhekelelwa le ndaba yalo yokuliqala kabusha, lihlelwe kahle, kucace ukuthi hhayi nangu lo, umakhonya lo.
“Asibanga sisacucuza sahlala phezu kwayo. Izinkulumo noSokhela (Patrick) zithathe izinyanga kodwa zaphazanyiswa yindaba yeCoronavirus ngonyaka odlule.
“Zibe sezivuka kahle sekungo-Agasti/Septhemba ngonyaka odlule, uma kuphela isizini. Zifike emaphethelweni ngomhlaka 1 Okthoba. Kuyaye kuthiweke okunye sekungumlando,” kulandisa uZungu.
Uthe kwakuthi akandize ngesikhathi AmaZulu esemenyezelwa njengeqembu lakhe ngokusemthethweni kusanda kuqala isizini.
“Okwangijabulisa kakhulu ukuthi ngaphambi kokuthi siziqede izinkulumo wathi uBab’ Khoza (Irvin) wePSL, usumfonele yini na uMdlokombane (iSilo saMabandla, uGoodwill Zwelithini ongasekho), uBayede usumfonelile wamazisa ngale nto oyenzayo.
‘Wathi ngiyakunxusa ukuthi umthinte ngoba kuzobaluleka ukuthi ayibusise le nto oyenzayo,” kuchaza uZungu.
“Nempela ngamfonela uBayede sahlangana naye, akakaze ajabule kanje. Ngakho ngesikhathi ngiba sesithangamini nabezindaba sengethula ukuthi nakhu osekwenzekile, ngangijatshuliswe ukuthi izibusiso zikaBayede sengizitholile.
“Lokho kubalulekile kithi singabantu abamnyama ukuthi izinto esizenzayo zinazo izibusiso. Noma esehamba uBayede sibe nesiqiniseko thina siwuSuthu ukuthi uyamamatheka lapho ekhona.”
UZungu uthe ujabule ngokwenza kahle koSuthu kodwa lokho akumphazamisi kwamanye amabhizinisi akhe.
“Emabhizinisini ami kukhona uShuter & Shooter onabaphathi bawo benza kahle. Kukhona amabhizinisi ezimayini kodwa angizibambele kuwona, kukhona abayizemenenja lapho.
“Ngingathi nje amabhizinisi ami wonke anabaniniwo abawaphethe, abakhokhelwayo, abazuzayo ngokuba khona kwami njengomqondisi.
“Nokho akudingi ukuthi mina ngibe khona zonke izinsuku,” kucacisa uZungu.
Ngabe ulubona lukuphi Usuthu esikhathini esizayo njengoba ibukeka ikhanya indlela ebheke phambili?
“Iqembu sizothatha unyaka nonyaka ukulakha. Izinqumo ezibalulekile zangonyaka ozayo yima sizozithatha, ukuthi obani esibaqashayo.
“Yima sisazohlala sithi nangu esimfunayo. Yilaphoke oyobona khona ukuthi iqembu lethu lizoba kanje.
“Siya endaweni entsha esingakaze sibe kuyona, ukuyodlala e-Afrika. Kunezingqinamba okuzoqhamuka nazo. Ngakhoke sonke sizofunda.
“Okungeke kushintshe ukuthi uma sekudlalwa ibhola abadlali bazobe belingana ngapha nangapha,” kuphetha uZungu.
Previous Previous post: USikhosana noma uMoloi? Ngubani ozowina olokuphatha i-ASA?
Next Next post: Isililo ngokushona kukanompempe wePSL